ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အလွန် စီးပွားရေး ကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေ ဘယ်လို စီစဉ် ထားသလဲ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်း သတင်းများ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အလွန် စီးပွားရေး ကို ကမ္ဘာ့ န...
18 มี.ค. 2563 - 06:46 น.
အိမ်ဖြူတော် က စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုတွေ ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက် လာရင် ပြန်လည် ထူထောင် နိုင်မဲ့ အစီအစဉ် တစ်ရပ် ကို သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီကိစ္စ ကို အမြန် အကောင်အထည်ဖော်ချင်ပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့ ရန်သူ နဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမေရိကန် ရဲ့ လေကြောင်း လိုင်းတွေ၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်သွားတာ ကို မမြင်ချင်ပါဘူး လို့ ပြောဆို သွားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး ပြန်လည် နာလန် ထူ ဖို့ အတွက် ဒေါ်လာ ၈၅၀ ဘီလီယံ လောက် ကို သုံးစွဲ သွားမယ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး စတိဗ် မနူချင် က ဆိုပါတယ်။
ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်မှာလည်း ဒီအစီအစဉ် ကို အမြန်ဆုံး အတည်ပြု ပေးဖို့ အိမ်ဖြူတော် ဘက် က တောင်းဆို လိုက်ပြီး သမ္မတ ထရမ့် ရဲ့ အစီအစဉ်ဟာ ကြီးမားပြီး ကဏ္ဍစုံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းတွေ ဟာ ၉/၁၁ တုန်းက ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အဦ တိုက်ခိုက် ခံရမှု ထက် ပိုမို အထိနာ မယ်ဆိုပြီးတော့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ် ထားပါတယ်။
ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ရဲ့ အစီအစဉ်တွေက အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ကြားမှာ ရေပန်းစား
ဒီကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် စီးပွားရေး ကျဆင်းသွားခဲ့ရင် ပြန်လည် ထူထောင် နိုင်မယ့် အစီအစဉ် တစ်ရပ် ကို လည်း ဗြိတိန် အစိုးရ က ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
အစိုးရ အနေနဲ့ စားသောက် ဆိုင်တွေ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ထိခိုက်သွားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘီလျံ ရှိတဲ့ အစိုးရ ဘတ်ဂျက် ကို ထုတ်ပြီး သုံးစွဲ သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန် အစိုးရ အနေနဲ့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည် တိုးတက် လာစေဖို့ အစွမ်း ကုန် လုပ်ဆောင် သွားမယ် ဆိုပြီး ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြိး ရီရှီ ဆူးနက် က ပြောကြား ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူသေဆုံးမှု အရေအတွက် ဟာလည်း နှစ်သောင်း လောက်ပဲ ရှိခဲ့ရင် ဒါဟာ ရောဂါ ထိန်းချုပ်မှုမှာ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ ရလဒ် ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဌာန အကြီးအကဲ ပက်ထရစ် ဗားလန့်စ် က လွှတ်တော်မှာ ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် သတင်းထောက်တွေ ကို တရုတ်နှင်ထုတ်
အမေရိကန် သတင်းဌာနတွေ ဖြစ်တဲ့ ဝါရှင်တန်ပို့စ်၊ နယူးယောက် တိုင်းမ်စ် နဲ့ Wall Street ဂျာနယ် တို့က သတင်းသမား တွေ၊ တရုတ် နိုင်ငံထဲမှာ သတင်း ရယူခွင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် တွေကို အစိုးရ က ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီသတင်းသမားတွေ အနေနဲ့လည်း တရုတ် နိုင်ငံတွင်းက အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာ ဖို့ တရုတ် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘက် က ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ဒီလ အစောပိုင်းတုန်း က အမေရိကန် အစိုးရ က တရုတ် သတင်း သမား တွေ သတင်းရယူခွင့် အသိအမှတ်ပြုထားမှု တွေ ရုပ်သိမ်း ခဲ့တာကို လက်တုံ့ ပြန်တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
သတင်းသမားတွေကို နှင်ထုတ် ခဲ့တဲ့ တရုတ် အစိုးရ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက် ပွန်ပီယို က တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
ယူရို ၂၀၂၀ ဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေ အားလုံး ကိုလည်း ရွှေ့ဆိုင်း
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုတွေ မြင့်မားနေတဲ့ အတွက် ယူရို ၂၀၂၀ ဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေ အားလုံး ကိုလည်း ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ကြောင်း ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA က ထုတ်ပြန် ကြေညာပါတယ်။
ဒီဘောလုံးပွဲတွေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနဲ့ ဇူလိုင် လာတွေမှာသာ ကျင်းပ တော့မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီး လာမယ့် ဇွန်လ ကျရင် အာဂျင်တီးနား နဲ့ ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံတို့မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ ကိုပါ အမေရိက ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ တွေကိုလည်း ရက် အကန့်အသတ် မရှိ ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ် ကော်မတီ IOC က လာမယ့် ၄ လ အတွင်း ဂျပန်မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ နွေရာသီ အိုလံပစ် ကို တော့ သတ်မှတ်ချိန် အတိုင်း ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ရက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မရှိဘူး ဆိုပြီး ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက် ကနေ Live လွှင့်ပြီး အသုဘ အခမ်းအနား တွေကို တက်ကြတဲ့ အစီအစဉ် ကိုသာ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်း ထား
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာတော့ အသုဘ ပို့တဲ့ လူတွေ အနေနဲ့ သာမန် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် သချိုင်းတွေကို သွားရောက် ပို့ဆောင်မယ့် အစား လူမှု ကွန်ရက် တွေ ကနေပဲ အသုဘ ပို့ကြဖို့ တာဝန် ရှိသူတွေက တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က လူ ဆယ်ယောက်ထက် ပိုပြီး မစုဝေး ကြဖို့ ပြောဆို ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ လူမှုကွန်ရက် ကနေ Live လွှင့်ပြီး အသုဘ အခမ်းအနား တွေကို တက်ကြတဲ့ အစီအစဉ် ကိုသာ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် သုဘရာဇာ လုပ်ငန်း လုပ်သူတွေ အနေနဲ့ကလည်း အသုဘ အခမ်းအနား ကို live ထုတ်လွှင့် နိုင်အောင် ပြင်ဆင် လာကြတာ ကိုတွေ့ ရပါတယ်။
အိုက်စ်လန် နိုင်ငံမှာတော့ အသုဘ အခမ်းအနား တွေကို ရွေ့ဆိုင်း ထားဖို့ သုဘရာဇာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အဖွဲ့ ကြီးက တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အလွန် စီးပွားရေး ကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေ ဘယ်လို စီစဉ် ထားသလဲ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်း သတင်းများ